ညီလင်းသစ်: အိတ်မှောက်သွန်ပစ် နှစ်ဆယ့်ရှစ် (တဂ်ပို့စ်)
Posted by ညီလင်းသစ် au 28.8.13
ကင်မရာအိတ်ကြီး သွန်တယ်မှတ်လို့ ကောက်မလို့ အပြေးလာတာ အစ်ကိုရာ ... လွဲသွားတယ် :P
ကီလိုပေါင်းများစွာလေးမယ့် အိတ်ကြီး လွယ်ရတိုင်း မိုင်ပေါင်းများစွာက မောင်နှမတွေကို သတိရလိုက်ပါနော်း)
မန္တလေး သားရေအိတ်လေးကို စွဲစွဲမြဲမြဲသုံးတာကိုလည်း သဘောကျမိတယ်။
ဟဟဟား ကိုညီလင်းသစ်က စာရေးကောင်းတော့ ဘာရေးရေး ဖတ်ကောင်းနေတာပါပဲ။ တော်သေးတာပေါ့ ဘောင်းဘီအိတ်က ၄ခုထဲ ရှိနေပေလို့ :)
ယောကျာ်းလေးတွေရဲ့ ဘောင်းဘီအိတ်က ပိုက်ဆံအိတ်ပဲဆိုတာ ခုမှ သိပြီ...။ တချို့ အိတ်တွေအများကြီးပါတဲ့ ဘောင်းဘီမျိုးဆို ဒီထက်ပစ္စည်းက ပိုများမယ် ထင်တယ်။ အိတ်လေးအိတ်မှာ ထည့်ထားသမျှက မရှိမဖြစ်တွေချည်းပါပဲ။ ကျွန်မတို့ မိန်းကလေးတွေသာ တိုလီမုတ်စ ပွထနေတာ..။ မသက်ဝေကျေးဇူးနဲ့ Tag Postလေးကြောင့် ဘလော့ဂ်တွေ လိုက်လည်ဖြစ်သွားပြီ ကိုညီရေ..။
ဟို ၁၇ ဆိုတဲ့ သော့အကြီးကြီးက မအိမ်သူနဲ့ဝယ်တဲ့သော့ကြီးဖြစ်ရမယ်။
ယောင်္ကျားလေးဘဝများအပြင်သွား ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရယ်နော်... တို့မိန်းမတွေများ အပြင်တခါသွားဘို့အရေး လိုအပ်ချက်တွေများမှများ
အစ်ကိုအိတ်နှိုက်တာလာချောင်းကြည့်သွားတယ်...း) 27ကျော်သွားလို့ ခေါင်းစဉ်လေးပြောင်းပစ်လိုက်တာလေးသဘောကျတယ်..စာရေးကောင်းတော့ ဘယ်လိုရေးရေးဖတ်ကောင်းနေ စွဲဆောင်မှုရှိနေတာပါပဲ...
Tag ပို့စ်ဆိုတာ ဒီနေ့ ဖေ့ဘုတ်ကို ၀င်မှ သိတယ် :D
ရက်က ကျော်သွားပြီမို့ သွန်တော့ပါဘူးလေ...
အကို ရေးတာဖတ်ပြီး ရယ်မိတယ်...
အေးခဲနေတဲ့ ညီမစိတ်တွေပါ ပြန်နွေးထွေးလာသလိုပဲ
Blog List မှာ ကြည့်လိုက်တော့ ဟာ... တို့ ကိုညီလင်းတစ်ယောက်လည်း အိတ်မှောက်သဟ.. လို့ အသံထွက်ပြီး အော်လိုက်မိတယ်... တကယ်.. တကယ်...
ဘောင်းဘီ အိတ် လေးအိတ်စလုံး အပြည့် ပစ္စည်းတွေထဲမှာ Little Red Dot အမှတ်တရလေးက so touched...
Tag Post လေးကို ပျော်ပျော်ပါးပါး ရေးပေးတာ ကျေးဇူးနော် ကိုညီလင်း...း-)
ကိုညီလင်း ရဲ့ အရှေ့ညာဖက်ဘောင်းဘီအိတ်ထဲမှာ ပါတာတွေက တကယ့် အရေးတကြီးတွေချည်းပဲ ။
မြေအောက်ခန်း ကိုရော မြေအောက်ခန်းသော့တံကိုပါ စိတ်ဝင်စားတယ် ။
( ရွှေအိုးကြီးတွေမြင်ယောင်ရင်း မေး)
များလိုက်တဲ့ ကဒ်တွေပါလားနော်း) ချမ်းသာလိုက်တဲ့ သူကြီးး ။
ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပြီး မဲဆောက်မှာတုန်းက လွယ်ခဲ့တဲ့အိတ်ကလေးတောင်ပြန်သတိရတယ်။
ဒါနဲ့ဖုန်းကိုဘောင်းဘီအိတ်ထဲထည့်ရင် ဘာဖြစ်လို့လဲ အစ်ကို တကယ်မသိလို့ ။
ကိုညီလင်းမို့ ဒီသော့တွဲကြီးကို ဘောင်းဘီအိတ်ထဲ
အရင်က အခန်းသော့ကို ပိုက်ဆံအိတ်ထဲ ကီချိန်းမတပ်
ပဲ ထည့်ထားတာရယ်...၊ကျန်တဲ့သော့တွေဆို နံပတ်
နဲ့ ဖွင့်ပိတ်လုပ်တဲ့ သော့တွေနဲ့ခတ်တယ်ဗျ... :)))
အိန်ဂျယ်က အစ်ကိုတော့ ကင်မရာအိတ်ကြိး ဖွင့်မယ် ထင်နေတာ ..လွဲသွားတယ် တည့်တည့်ကြိးပဲ ..:P အစ်မချစ်ပြောသလိုပဲ တော်သေးတယ် ဘောင်းဘီအိတ် လေးအိတ်ပဲ ရှိလို့... :D ဒါနဲ့ စကားမစပ်အကို ဈေးဝယ်ရင် ရှိသမျှ အကြွေစေ့တွေ ထုတ်ပေးတော့ အရောင်စာရေးမလေးတွေက... မျက်လုံးကြီး ပြူးပြီး ကြည့်ကြဝူးလားဟင်... :)
အခုလို လာအားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ...၊
ဟားဟားဟား... ပြောရော့မယ် ညီမလေးကတော့...၊ အင်း.. ကင်မရာအိတ်က အထွက်ထက်စာရင် အဝင်တွေပဲ များနေတာ...၊း)
အဟား.. အဲဒါက ပုံမှန်ဝတ်နေကျ ဂျင်းဘောင်းဘီတွေ အတွက်ကို ပြောတာ အစ်မရ..၊ တခါတလေ carpenter pants လို အိတ်တွေ အများကြီးနဲ့ဟာ ဝတ်လို့ကတော့ ကြိုက်တဲ့နေရာ ထည့်လို့ရလို့ သဘောတွေ ကျနေရော...၊း))
အစ်မလည်း ခုတလော ပျောက်နေသူတွေထဲ ပါတယ်နော..၊း) ဟောဒီပို့စ်လေးကို အကြောင်းပြုပြီး ပြန်တွေ့ရတာ ဝမ်းသာတယ်ဗျာ...၊း)
အဲ.. မဟုတ်ဘူးဗျ၊ အဲဒီသော့ကြီးက cellar မြေအောက်ခန်း ဖွင့်တဲ့သော့...၊ ဒီအိမ်နဲ့အတူ ပါလာတာ...၊း)
ဒါက ပုံမှန်မို့လို့ မရိုစ့်ရဲ့..၊ ဓါတ်ပုံပစ္စည်းတွေ သယ်တဲ့အခါများ ဆိုရင်တော့ လူနဲ့ကို မတူဘဲ ဝန်တင်လားနဲ့တောင် တူသွားတတ်တယ်...၊းD
ညီမက မန်းသူလား...? ကျနော်လည်း မန္တလေး မရောက်ဖြစ်တာ ကြာပြီဗျာ...၊
ကျေးဇူးပါ ညီမရေ...၊ ဟုတ်တယ်ဗျ၊ ကိုယ်က သူများတွေလို အချိန်မီ မရေးနိုင်တော့ အဆင်ပြေအောင် လုပ်ရတော့တာ ပါပဲ..၊း)
ကဲ.. ပျောက်နေတဲ့ ညီမလေးလည်း တဂ်စကြာနဲ့ ဆင့်ခေါ်လိုက်မှ ရောက်လာတော့တယ်၊းD ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ပြန်တွေ့ရတာ ဝမ်းသာတယ် ညီမရေ...၊း))
မမှောက် ခံနိုင်ရိုးလားဗျာ...၊ ရေးဖော်ရေးဖက်တွေ လှုပ်ရှားအသက်ဝင်လာအောင် ၃ ကီလိုခွဲ လေးတဲ့ အိတ်နဲ့ မွှေ့ယမ်းလိုက်မှတော့ ရေးကို ရေးရတော့တာပေါ့....၊းD
ဟုတ်တယ်ဗျ၊ တော်ကြာ မတော်တဆတွေ ဘာတွေဖြစ်လို့ ရှော့ခ်ရပြီး ကိုယ့်သွေးအုပ်စု ကိုယ်မေ့နေမှာ စိုးလို့...၊း) အဲ.. မြေအောက်ခန်းကတော့ ဘာမှအထွေအထူး မဟုတ်ပါဘူးဗျာ၊ တိုလီမုတ်စတွေနဲ့ ဝိုင်ပုလင်း၊ ski, ခရီးဆောင်သေတ္တာ စတာတွေ ထားတာပါ၊ ရွှေနဲ့ ဆင်တာဆိုလို့ နနွင်းမှုန့် ပုလင်းပဲ ရှိတယ်...၊းD
အထင်မကြီးနဲ့ဗျ..၊ ကဒ်တွေက ဒစ်စကောင့်ကဒ်တွေ၊ မင်န်ဘာကဒ်တွေ ချည်းပဲ..၊ လက်တွေ့မှာ ဘာမှ အသုံးမဝင်ဘူး၊း) ဖုန်းကို ဘောင်းဘီအိတ်ထဲ မထည့်ဖို့ ပြောကြတာက ဖုန်းကနေ အမြဲ ထုတ်လွှတ်နေတဲ့ radiation ရောင်ခြည်တွေကြောင့်ပါ၊ ဖုန်းကို လုံးဝပိတ်ထားတဲ့ အချိန်ကလွဲလို့ radiation တွေအမြဲ ထွက်နေတတ်တော့ ယောက်ျားတွေရဲ့ မျိုးပွားအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းကို ထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ ပြောကြတယ်...၊း)
အေးဗျာ.. ကိုညိမ်း ပြောမယ်ဆိုလည်း ပြောစရာပါပဲ၊ ကျနော့်မှာ အဲဒီသော့တွဲကြီးနဲ့ ဒုက္ခ ခံနေရတာ၊း) ဒါနဲ့ မတွေ့တာ ကြာပြီ၊ အားလုံး အဆင်ပြေတယ် မဟုတ်လား...၊း)
အဟား.. ကင်မရာအိတ်ထဲမှာ သွန်စရာတွေ မရှိသေးလို့ မဖွင့်သေးတာ ညီမရဲ့...၊ အရောင်းစာရေးမလေးတွေ မကြည့်ပါဘူးဗျာ၊ သူတို့က အကြွေရလို့ ကျေးဇူးတောင် တင်သေး..။း))
အော ဂလိုလား? အင်း မှားတဲ့အခါလဲ မှားပေမပေါ့ :D
ကိုညီ့အိတ်က ထင်ထားတာထက် ရှင်းတယ်...း))
အို သူလဲ သူ.ဆိတ်အထွာနဲ. အတော်ဟုတ်ရှာသား။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကိုညီလင်းက တော်တော်ခင်ဖို.ကောင်းတယ်။ အမတွေ ညီမတွေကြားထဲက မောင်တယောက် ၊အကိုတယောက် လိုဘဲ ..အမတွေညီမတွေရေးခိုင်းတာကို သေချာ ဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်၊ စီကာစဉ်ကာနဲ.ရေးတတ်ပါ.။
ဟီးဟီး ဝေါလက်လေးနဲ.သော.တွဲလေးနဲ.တွေ.ရတော. အသံထွက်အောင်ရီမိသွားတယ်။
ကိုညီလင်းအိတ်က ဘာမှလဲမပါဘူး။ မအိမ်သူအိတ်သွားမှောက်ပါဗျို.။
In my bag I even have diaper, baby wipe and one extra cloth for my girl. :-)) My friend said why not you use luggage. :-))
ကိုညီ့အိတ်က အရှင်းဆုံး.. ၁၇ မြေအောက်ခန်းသော့တံကြီးက တကယ့်ကို ကလန်ကလားကြီး..း)
ကိုညီ့ပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး ကိုယ်နဲ့တူတဲ့ နေရာလေးတွေ ရောက်ရင် ဟတ်ခနဲ ရယ်လိုက်၊ ခေါင်းတဆတ်ဆိတ် ညိတ်လိုက်၊ ကုန်သွားတဲ့ ဖုန်းကဒ်လေးတွေ သယ်ထားဆောင်ထားတာချင်းကလည်းတူ၊ ဘောင်းဘီအိတ်ထဲက သော့တွဲထုတ်ရင် ဟိုငြိဒီငြိ ဖြစ်တတ်တာချင်းကလည်းတူ....
ဖတ်လည်းပြီးရော ကျွန်တော့်မျက်နှာကြီးက ပြုံးဖြီးဖြီးကြီး ဖြစ်လို့...
ဘာမှ ထုတ်ပြစရာ မရှိတဲ့ပိုက်ဆံအိတ်လေးကိုပဲ အကြောင်းအရာလေးတွေ စီကာပတ်ကုံး ရေးပြသွားတာလေးက ဖတ်လို့ကောင်းတယ် ဘရို...
လက်ရှိဖုန်းလေးကို ရေကူးတတ်မတတ် စမ်းမယ့်နေ့ကိုလည်း မျှော်လင့်နေပါကြောင်း...
ပထမတုန်းက “စုံထောက်ကြီး” လို့ ပြောတယ်၊ အခု “မှားတဲ့အခါလည်း မှားပေမပေါ့” လို့လည်း ပြောပြန်တော့ သေချာပြီ... ဦးရှံစားပဲ ဖြစ်ရမယ်...၊း)
ဟုတ်တယ်ဗျာ...၊ အဲဒါကြောင့် ရေးစရာတောင် သိပ်မရှိလို့ မနည်းစဉ်းစား လိုက်ရသေးတာ..၊း)
သြော်.. ဘလော့ဂ်လောကကြီး ခြောက်ကပ်ရတဲ့အထဲ ပြေးကြည့်မှ ဒီလူ၊ ဒီလူပဲ ရှိတာဆိုတော့ အစ်မတွေ၊ ညီမတွေ ပြောတဲ့အတိုင်း ရေးရတော့တာ ပေါ့ဗျာ၊း) ဒါနဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်နဲ့ သော့တွဲကို တွေ့တော့ ဘာတွေများ သဘောကျသွားပါလိမ့်...?း)
အာ.. သူ့အိတ်သွားမှောက်လို့ မတော် ကျနော့်အပေါ် ထမင်းအိုး ပြန်မှောက်လိုက်မှ တခါတည်း ဗိုက်ပါ မှောက်နေရပါဦးမယ်ဗျာ....၊ ဟူး.....။းD
Really...!! :) Then, yours must be like Mary Poppins' bag. :D But, it's so sweet to see motherhood insideabag. :)
ဟုတ်တယ်...၊ ဟုတ်တယ်...၊ သူပေါ့..၊ ဘောင်းဘီအိတ်နဲ့ တချိန်လုံး ငြိနေတာ...၊း))
ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ ပြန်တွေ့ရတာ ဝမ်းသာတယ်ဗျာ...၊ တကယ်...၊း) အဲ.. ဖုန်းလေးတော့ ရေကူး သင်ဖြစ်မယ် မထင်ဘူးဗျ၊ ခမျာ အအေးပတ်ပြီး နေမကောင်းဖြစ်နေမှာ...။း))
ပစ်လည်း ဘောင်းဘီအိတ်ထဲ ပဲ
ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကို ဘောင်းဘီအိတ်ထဲထည့်တော့ မလေးဘူးလား ကိုညီလင်းသစ်။ ခေါင်းစဉ် ယူသွားတယ်နော်။ အဲဒီအတွက် ကြိုက်တာကျွေးပါ့မယ်။
အိတ်မှောက်ကြောင်း တင်နေတာကို ဘလော့က ဂဂျိုးဂဂျောင်လုပ်နေတယ်။ post အသစ်တက်တာ မမြင်ရဘူး။ ခုမြင်ရတော့ နှိပ်ကြည့်တော့လဲ ဆောရီးတဲ့။ သူကမတက်လာတော့ လရိပ်က ဖျက်လိုက်ပြန်တင်လိုက်လုပ်နေတော့ ဘာတွေမှန်းကို မသိဘူး ဖြစ်ရော။ လင့်အမှန်က ဒီမှာ
ဘလော့တွေလည်ခွင့်ရလို့ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပေါင်းများစွာက သွန်ခဲ့တဲ့ အိတ်ထဲက စနစ်တကျ စီစီရီရီ ပစ္စည်းလေးတွေကို ကြည်နူးစွာဖတ်သွားတယ် မောင်ညီလင်းး)
စာရေးကောင်းသူဆိုတော့ ဘယ်လိုရေးရေး ဖတ်ကောင်းနေတာအားကျစရာပဲ ...